Alaharo ny lisitry ny orinasa fialan-tsasatra ataonao amin'ny kalandrie marobe
Rehefa mampitombo ny fitantanan-dry zareo amin'ny fialan-tsasatra fialan-tsasatra na orinasa iasan'ny trano fonenana servisy ny mpampiantrano dia miatrika olana goavana amin'ny lafiny rehetra izy ireo. Ny iray amin'ireny dia mety manana fijerena maso mazava momba ny famandrihana amin'ny fananana isan-karazany. Na dia takiana aza ny vahaolana izay mampiseho ireo fananana rehetra eo akaikin'ny tsirairay amin'ny pejy iray ihany, dia matetika no ampiarahana amin'ny fampisehoana fananana any amin'ny tanàna hafa amin'ny pejy iray ihany izy ireo, ka manahirana ny mahita famandrihana mora foana na mamaly fanontaniana momba ny misy aorian'ny famotopotorana amin'ny famandrihana.
Ankoatr'izay, ho an'ny fametrahana vidiny mahomby, ny mpitantana ny vola miditra dia mitaky topy maso momba ny sanda amin'ny karazan-tariby sy ny fisian'izy ireo, ary koa ny fameperana mety ho nampiharina tamin'ny tsindry bokotra iray. Betsaka ny mpamatsy rindrambaiko no mety tsy manana an'ity endri-javatra ity, izay mahatonga ny fanaraha-maso ny tahan'ny tsy ilaina amin'ny fotoana ilana azy.
Ahoana ny fomba hanampian'ny kalandrie marobe an'i Zeevou?
Ao amin'ny Zeevou dia takatsika tsara ny olana sedrain'ny mpampiantrano rehefa mandanjalanja ny orinasan'izy ireo izy ireo, ary nanandrana nitady vahaolana mahomby ho an'ireo olana atrehin'izy ireo mandritra izany. Ao anatin'izany dia nanamboatra caledars roa marobe isika - ny iray ho an'ny famandrihana, ary ny iray hanehoana ny tahan'ny sy ny fahafaha-manao.
Kalandrie momba ny vidiny sy ny fahazoana
Ankoatry ny famoronana Kalandrie Famandrihana ho an'ny fanananao rehetra, Zeevou koa dia mamorona tetiandro ho an'ny tanàna tsirairay izay itantanana ny singa. Izany dia manamora ny fitetezana ny kalandrie raha manana fananana be dia be ianao ary mamonjy anao ireo segondra sarobidy mandritra ny telefaona an-telefaona ho an'ireo vahininao, ahafahanao manolotra serivisy ho an'ny mpanjifa ambony indrindra. Mba hanamorana bebe kokoa ity fizotrany ity dia azonao atao ny manaparitaka ireo singa ao anaty karazana unit na ao anaty trano iray ao anaty laharana iray, amin'izay mamela anao hifantoka amin'ireo fananana mahaliana amin'ny fotoana rehetra.
Ankoatr'izay, azonao atao ny mamorona famandrihana sy manakana ireo daty mivantana avy amin'ny Kalandrie Famandrihana, mampihena ny isan'ny tsindry ilaina hamita ilay asa!
Ny Kalandrie Famandrihana dia mampiseho famandrihana amin'ny dingana samihafa amin'ny famitana amin'ny loko samihafa. Ankoatry ny fahafahanao mahazo topi-maso ny famandrihana tsirairay amin'ny alàlan'ny fanindriana azy dia azonao atao ihany koa ny misintona sy mandatsaka famandrihana eo anelanelan'ny singa. Ny fanaovana izany dia mitaky anao hanamarina ireo fanovana naseho, ary hanome anao safidy hihoarana ny vidin'ny famandrihana ao anatin'ilay fizotrany.
Ankoatr'izay, aseho koa ny toe-pahadiovan'ny singa tsirairay. Isaky ny asa tokony hatao ny fikarakarana trano (toy ny amin'ny fizahana na ny asa fikarakarana tokantrano antonony), dia voamarika ho maloto ilay singa, mandra-pahatongan'ny fotoana ianao na ny Cleaners dia nanamarika ny singa ho madio (izay atao ho azy raha toa ka misy marika feno amin'ny alàlan'ny finday fampiharana).
Ny Kalandrie momba ny vidiny sy ny fahazoana dia mamela anao hahita ny isa napetrakao isaky ny karazana unit, miaraka amin'ny fameperana rehetra. Ambonin'izany, mampiseho ny isan'ny singa rehetra ho an'ny karazana singa isaky ny alina izy, ary mampiseho aminao hoe firy amin'ireo sisa no amidy mandritra ny alina. Ny fahitana an'ity fampahalalana ity amin'ny toerana iray dia ahafahanao manamarina mora ny tahan'ny mety mila fanitsiana mba hampitombo ny habakao.
Raha vantany vao nanapa-kevitra ny amin'ny fanovana ny tahan'ny daty voatondro ianao, dia azonao atao izany amin'ny alàlan'ny fitarihana sy fandatsahana ny totozy fotsiny manomboka amin'ny daty fanombohana ka hatramin'ny daty farany amin'ny laharan'ny sokajin-taratra voakasik'izany. Raha te hanova ny vidin'ny sokajin-tarika marobe indray mandeha ianao, aza manahy - voasaronay ny lamosinao endri-javatra fametrahana taha betsaka!